Mkpụrụ vine na-eji ifufe eme ihe na agwaetiti Richard Branson na - agwa anyị okwu - A na - eme anyị na Spain
E Dere 9 January, 2019 By HB
Necker Island bụ aha nke onwe n'àgwàetiti eccentric Billionaire Richard Branson, emi odude ke Virgin Islands, ebe nke a mere ikpeazụ Wednesday Irma Hurricane ebibi ihe niile dị ya ụzọ nwere. Irma ga-kwuru na a hurricane na 5 5 Atiya, bụ otu n'ime ndị kacha egbu mmadụ na ọdịdị, n'ụzọ ziri ezi, ọ kpọrọ ya "mkpịsị aka Chineke" na ot'omuma film nke 90, Twistter.
Tinyere ihe ndị ọzọ, Richard Branson nwere okpuru ulo dị n'okpuru ala ebe o kpebiri ịgbaba ruo mgbe Irma gafeere ya. Ya onwe ya kwuru na ụlọ ọrụ ndị o nwere n'àgwàetiti ya dị njikere iguzogide ọnọdụ ala, ọ bụ ezie na e nwere ihe ole na ole nwere ike iguzogide ajọ ifufe nke 5, ya mere, ha amaghị ma ọlị.
Ma eziokwu bụ na mmeri ahụ meriri, ma ọ bụghị nke ọzọ agwaetiti, nke mebiri emebi. Ozugbo n'oge gara aga na hurricane, Branson kwuru, sị: "Anyị na-ndo ike hurricane na ka mere na a kpọmkwem akụkụ nke winery, na, nnọọ dabara nke ọma, nọgidere ike. Echiche anyị na ndị ọdachi a dakwasịrị na n'akụkụ nile nke Virgin Islands, Caribbean na karịrị "
Tupu ajọ ifufe ahụ, Branson na-ekwusi ike na ebe ọ bụ na ya na ndị otu ya ga-agbaba n'ụlọ nkwakọba ihe, ọ ga-abụ na enwere obere karama ole na ole karịa mgbe ị na-abanye. Ma ọ bụ nkịtị, mmanya nwere ike ịbụ nnukwu enyi na oge ọgba aghara na ebe mgbaba na ọtụtụ mmadụ. Enweghi uzo di nma iji weputa oge nke uzo kacha mma bu iji gbochie ihe na-eme n'èzí karia kariri otu karama mmanya, na, ima onye o bu okpuru uloN'ezie, ha agaghị abụ mmanya na-edozi ahụ.
Necker & ebe dum kpam kpam kpamkpam. Echiche na onye ọ bụla nke Ajọ Ifufe na-emetụta #Irma. Daalụ maka nkwado https://t.co/0ji8qCZR6K pic.twitter.com/47BDKyrjvK
- Richard Branson (@richardbranson) 7 Septemba nke 2017
A njem site na La Rioja, Na Ribera del Duero, Bordeaux, Entre Deux Meres ma ọ bụ Tuscany, isi lekwasịrị anya ụtọ ọ bụla nke aromas na Njirimara nke ụfọdụ ndị kasị mma mmanya na ụwa ... ichoputa, na-amụta na-achọpụta na usoro eji site winemakers na ha mmepụta, idụhe nke ebe n'oge owuwe ihe ubi, oge mmanya ahụ na-ezu ike ruo mgbe anyị meghere ya n'oge ajọ ifufe, na ihe nzuzo ndị ahụ nile nke karama mmanya na-ezo.
Naanị ahụmahụ nke ụda mmiri na mmiri ozuzo dị ka oké ifufe #Irma edita mgbe ọ bụla - onye ọ bụla jụụ & upbeat https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/lbM0bdHxCv
- Richard Branson (@richardbranson) 6 Septemba nke 2017
Ma ọ bụrụ na mmanya ndị a so ndị na-aṅụ ọgwụ o Iberian ham, ị nwere ike ime ka oge nhụjuanya ghọọ obi ụtọ dị ọcha. Na ihe niile na-adabere na anyị, anyị na-enyefe na-atụ egwu na-anọ ọnọdụ abalị cowering hurricane, na emechi anya, na-ekpe ekpere, ma ọ bụ na anyị nwere ike tụgharịa ọnọdụ ahụ ma were ya. Anyị ji n'aka na Sir Richard Branson na ndị otu ya mere ka ha nọrọ na Winery na ekele maka Irma.
Na-atụ anya ike zuru oke nke Ifufe #Irma n'ihe banyere 4 awa, anyị ga-alaghachi n'ụlọ okpuru mmanya dị n'okpuru ụlọ https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4V
tagged: Bodega/ajọ ifufe/Obodo Virgin/Richard Branson/Mmanya
Next post: Bodegas Pradorey, ndị a họọrọ nke Ribera del Duero